Abasha bagqugquzelwe ukufika phezulu
i-2017 ICC Women’s World Cup yenza okuningi kumdlalo wabesifazane kunokufika emicabangweni yabantu base-South Africa, kwagqugquzela abancane, u-Raisibe Ntozakhe no-Nadine de Klerk ukufuna ukuqhubeka ngokusebenza kanzima ukuze bahlale nama-Momentum Proteas.
Labadlali badlala imidlalo yabo yokuqala ngesikhathi se-Cricket South Africa (CSA) Women’s Quadrangular series okubalwa khona i-India, i-Zimbabwe ne-Ireland e-Potchefstroom ngo-May kulonyaka, njengoba babalwa kwiqembu lendebe yomhlaba. Nokho bengalitholanga ithuba lokudlala, isipiliyoni somqhudelwano beseceleni futhi nezifundo abazithola ngokubuka abadlali abakhulile akade besebenza kubagqugquzelile ukufuna ukwenza okunye.
“Bengazi ngifika kwindebe yomhlaba ukuthi angeke ngidlale, kodwa ithuba lokufunda bekwanele,” kusho u-Ntozakhe. “Bengivuka ngizincinze ukubheka ukuthi okwangempela, ngise-England kwi-ICC World Cup. Kugqamise umsebenzi wami futhi mhlawumbe nempilo yami okwamanje.”
u-Ntozakhe uziveze emhlabeni ngokumemeza njengoba athatha ama-wicket amathathu ngama-runs ayisishagalombili ngomdlalo wakhe wokuqala kumdlalo wokuqala we-South Africa we-Quadrangular bedlala ne-Zimbabwe. Yena no-Shabnim Ismail bathatha ama-wicket ayisishagalombili phakathi kwabo ukuthola ukunqoba ngama-wicket ayisishagalombili bedlala nomakhelwane kwi-series eyanqotshwa i-India emuva kokuhlula iqembu lasekhaya kwi-final.
Lomdlali omncane uthi i-series imvule amehlo ngesikahla esikhona phakathi kwekhilikithi yezifundazwe nekhilikithi yezwe. Uyavuma ukuthi bekumele akhuphule izinga futhi kuthathe nokujwayela.
“Ikhilikithi yesifundazwe iyancintisana e-South Africa, kodwa uma usufike kwikhilikithi yezwe, umdlalo ohlukile,” esho eqhubeka. “Ngayijabulela inselelo kodwa kumele ngivume ukuthi bekumele ngikwenze konke ukuze ngifike kwizinga leqembu. Kunzima ukubalandela. Ngifunde kakhulu kwindebe yomhlaba.”
“Ngibuka ukapteni wami, u-Dané (van Niekerk) enza umsebenzi wakhe bekugqugquzelana. Ungenza ngifune ukwenza kangcono futhi ngidudule, ngisebenze kanzima. Uyiqhawe kimina. Uma umuntu ethatha ama-wicket amane engekho ama-runs futhi afike kwigumbi lokushintshela athi ‘bengingenza okukhulu kunalokho,’ awukwazi ukungamukhonzi umuntu onjalo kanye nendlela asebenza ngayo. Kuzongenza ngidudule kakhulu, ngenze kangcono futhi manje njengoba ngisekhaya, angeke ngilale, ngizodudula ukuze ngihlale kuleliqembu.”
Lomdlali oneminyaka engu-20 ophuma e-Alexandra eGoli uphinde wathole ukugqugquzelwa umqeqeshi, u-Hilton Moreeng, othi uchithe isikhathi eside ekhuluma ngezinhlelo zomdlalo zeqembu futhi ekhuluma naye ngayo yonke imidlalo eyadlalwa iqembu.
“Uyindoda emangazayo,” esho ejabula. “Uyazi kahle ikhilikithi futhi bengihlala eduze kwakhe bese angitshele ngezimo ezithile emdlalweni futhi ngithuke uma kufika lapha ekade esho khona.”
“Ukumjwayela kanye nokuhlala naye kunemidlalo kungenze ngawazi kangcono umdlalo wekhilikithi futhi manje sengiyazi ukuthi akukhona ngokusenkundleni kuphela nokwenza lezo zinto, kunendima edlalwayo ngaphandle kwenkundla futhi kunezifundo ongazithatha uhleli eceleni futhi ubuka.”
Oneminyaka engu-17 u-Nadine de Klerk uphinde amazwe ka-Ntozakhe, ekhuluma ngokubonga kokuba kwindebe yomhlaba kanye nokufunda akuthola kubadlali abadala kanye nomqeqeshi, owathatha isikhathi wachaza ngemisebenzi futhi nokumsiza ngokuphosa kwakhe ngezikhathi bezilolonga.
“Ukuhlala eceleni kunesifundo, bekungelula ngoba bekuningi obekumele kwenziwe, njengokuba nesiqiniseko ukuthi abadlali banamanzi enkundleni kanye nokuhlala nokukhuluma nezinhlelo nomqeqeshi eceleni. Bekunzima uma imidlalo inzima futhi ukubuka ukuthi abanye basebenza kanjani nencindezi kungifundise okuningi. Ngahamba nokuningi ngiya ekhaya,” kusho u-De Klerk.
u-De Klerk wanaka indlela iqembu labhekana nencindezi njengesifundo esikhulu ahamba naso futhi angathanda ukuphinda lokho kanye nokunqobela iqembu lakhe lesifundazwe, i-Northerns.
“Ukufika kwi-semi-final kanye nokulwa ngaleyandlela kwakungeke kube lula futhi ngingathanda ukufunda ukwenza lokho kanye nokunqoba imidlalo nginqobela isifundazwe sami kanye nezwe lami,” esho eqhubeka.
“Indlela wonke umuntu adlala indima futhi waphosa kumqhudelwano wonke bekuyinto yokunconywa. Angidlali uma ngithi leli iqembu eliphosa kahle emhlabeni wonke. Bayalwa futhi baqinisa isandla uma benza amalungiselelo futhi umuntu ofana nami omusha, bekuthusa kodwa bekugqugquzelana. Ngifuna ukusebenza ngaleyandlela.”
Njengoba umqhudelwano usuphelile, onqothswe iqembu lasekhaya, i-England, bobabili labadlali balindele ukubona ushintsho ngendlela ikhilikithi yabesifazane ebhekwe ngayo e-South Africa ngokudlala kweqembu. Bobabili bayakujabulela ukusebenza ukuze bagcine izindawo zabo eqenjini.
“Kumele usebenze isikhathi eside uma ufuna ukuhlala eqenjini elinje,” kuqhubeka u-Ntozakhe. “Ikhempu ihamba kahle futhi wonke umuntu uyayazi indima yakhe nokuthi ungena kuphi. Izinga lomsebenzi yinto ekhuthalelwayo futhi ngizosebenza kanzima ukuba nesiqiniseko sokuthi ngihlala lapha.”
u-De Klerk, okumele abambe ikhilikithi kanye nomsebenzi wesikole, ugqugquzelwe ukuthi asebenze kanzima kakhulu ukuze isikole kanye nomphakathi wakhe uziqhenye ngaye.
“Isikole sami (Hoërskool Waterkloof in Pretoria) bayangisekela futhi ngiyajabula ukuthi sengibuyile ngitshengise ukuthi ngifundeni. Isikhathi sokumisa kahle izincwadi zesikole kanye nekhilikithi, kodwa emuva kwesipiliyoni sami kwindebe yomhlaba, ngizosebenza kakhulu impela kwikhilikithi ukuba nesiqiniseko sokuthi angilahlekelwa indawo yami. Akuzonke izinsuku lapho umuntu omncane njengami angathola ukuphila iphupho lakhe.”
Protea kolwers sal nog aanhou veg – Birrell Elgar en Bavuma veg terug teen Engeland Bavuma en Morkel weer opvolgbeurt af maar Engeland in beheer Roland-Jones en Stokes plaas Engeland in dominante posisie Ons kan steeds 'n impak maak – Rabada Cook gooi wal teen Protea naatboulers op dag Du Plessis waak teen oorgerustheid Amla hoop vir meer vuurwerk by sy gunsteling stadion Rabada ‘reg vir aksie' Proteas verniel Engeland en is terug in reeks Proteas boulers gereed om hard te veg